नेपाल फर्किएलगत्तै देउवाको बोली : “केही पनि बोल्न नपाउने ? कि आचारसंहिता बन्नुपर्यो” « रिपोर्टर्स नेपाल
नेपाल फर्किएलगत्तै देउवाको बोली : “केही पनि बोल्न नपाउने ? कि आचारसंहिता बन्नुपर्यो”
भदौ १२, काठमाण्डौ । पाँच दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण सफल भएको दाबी गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले भारत भ्रमण सफल भएको दाबी पनि गरेका हुन् ।
संविधान संशोधनबारे दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्तिको देउवाले बचाउ गरेका छन् । दिल्लीमा उनले फेरि संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचना भइरहेको छ । यसबारे पत्रकारको जिज्ञासामा देउवाले भने, ‘मैले देशमा भएको यथार्थ कुरा भनेको छु । कुनै नराम्रो कुरा बोलेको हैन।’
सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशी जनताको भावनालाई समेट्ने प्रयासस्वरुप अघि बढाइएको र यही विषयलाई आफूले भारतमा उठाएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।
दुई देशबीच आपसी सम्बन्धमा विश्वास कायम गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने नै भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै देउवाले त्यसमानेमा आफ्नो भ्रमण सफल भएको बताए । उनले भने, ‘अरुले भनेजस्तो शिर निहुराएको हैन, मैले बरु नेपालको शिर ठाडो पारेको छु ।’
भ्रमणका बेला विदेशमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने कुराको आचार संहिता बन्नुपर्ने धारणा समेत उनले राखे । ‘के बोल्ने भनेर मैले सोधेर जाने ? केही पनि बोल्न नपाउने ? कि आचारसंहिता बन्नुपर्यो,’ उनले भने ।
भ्रमणका क्रममा बाढी तथा डुबानको समस्याको शीघ्र समाधान गर्न आफूले भारत सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सिमा क्षेत्रमा हुने बाढी तथा डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानको दिशामा विज्ञहरुको समूहले संयुक्त निरीक्षण गरी तत्काल उपयुक्त उपाय अपनाउने सहमति भएको जानकारी दिए । डुबानका विषयमा भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेको उनको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउने सहमति भएको पनि जानकारी दिए । उक्त आयोजनाबाट नेपालले पाउने लाभलाई सुनिश्चित गर्दै यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याइने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले धेरै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टनकपुर बाँध हेड रेगुलेटर एवं नेपाल सीमासम्म भारतले निर्माण गर्नुपर्ने लिङ्क नहरको डीपीआरलाई भारतीय पक्षबाट अन्तिम रुप दिइएको जानकारी प्राप्त भएको पनि बताए ।
४८ सदस्यीय भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्दै देउवा गत बुधबार नयाँदिल्ली गएका थिए ।